Redmi Note 10T, moobayl sida Redmi Note 10 5G ah, laakiin leh 4G | Androidsis
Haaruun Rivas | 29/06/2021 02:10 | La cusbooneysiiyay 29/06/2021 02:13 | Noticias, Xiaomi
Xiaomi waxay ka hirgalisay terminal cusub waxqabadka dhexdhexaadka ah suuqa, kaasoo imanaya sidii Redmi Xusuusin 10T. Taleefankan casriga ahi waa ficil ahaan Redmi Note 10 5G. Farqiga u muuqda, laakiin aan ka faa'iideysaneyn mobilada cusub, waa la'aanta isku xirnaanta 5G. Iyo, su'aasha, Redmi Note 10T kaliya waxay leedahay taageerada 4G.
Kuwa soo hadhay, waxaan si isku mid ah u wada leenahay sifooyin isku mid ah iyo qeexitaanno ku saabsan labada taleefan, taas oo naga dhigeysa Mediatek's Dimensity 700 processor chipset oo mas'uul ka ah waxqabadka labada aaladaha dhexe.
1 Noocyada iyo qeexitaannada farsamo ee Xiaomi Redmi Note 10T cusub oo aan lahayn 5G
Noocyada iyo qeexitaannada farsamo ee Xiaomi Redmi Note 10T cusub oo aan lahayn 5G
Waxa ugu horreeya ee la ogaado waa taas Redmi Note 10T oo aan lahayn 5G isku xirnaanta waxay leedahay qaabeyn isku mid ah iyo dhismaha Redmi Note 10 5G. Sidaa darteed, waxay leedahay muuqaal isku mid ah waxayna ku bixisaa isla dareenka gacanta. Dareenkan, cabirkiisa iyo culeyskiisu waa, siday u kala horreeyaan, 161,81 x 75,34 x 8,92 mm iyo 190 garaam.
Redmi Note 10T ayaa la socota shaashadda teknolojiyada IPS LCD oo ku faaneysa 6.5-inji dadban, xalka FullHD + ee ah 2.140 x 1.080 pixels iyo heerka cusbooneysiinta ee 90 Hz. Tan kale ayaa ah in gudigaan uu leeyahay dalool shaashadda qeybta dhexe ee kore ee kamaradda hore ee 8 MP oo leh f / 2.0 aperture.
Nidaamka kamaradda gadaal, oo kiiskan sidoo kale saddex laab ah, ayaa adeegsanaya a 48 MP shidma weyn leh f / 1.79 aperture iyo laba muraayadaha indhaha 2 MP ah oo leh f / 2.4 aperture loogu talagalay saameynta cilladaha garoonka (qaabka bokeh) iyo sawirada makro. Waxaa jira laba iftiin oo LED ah oo loogu talagalay iftiiminta muuqaalada iftiinka yar.
Sidii aannu nidhi, Dimensity 700 waa processor-ka processor-ka ku shaqeeya ee ku dhaca caloosha mobilka cusub wuxuuna gaaraa ugu badnaan saacadda oo ah 2.2 GHz, marka lagu daro ahaanshaha 7 nm. Inkasta oo SoC-kani uu la jaan qaadi karo 5G, marka la eego modem-ka uu isku milmay, qaabkan taageeradan waa la joojiyay sababo jira awgood, sidaa darteed waxay kaliya la jaan qaadi kartaa shabakadaha 2G, 3G iyo 4G. Isla mar ahaantaana, waxaa jira 4/6 GB RAM iyo 64/128 GB meel bannaan oo keyd ah, oo lagu sii ballaarin karo kaarka microSD.
Redmi Note 10T cusub ayaa sidoo kale leh akhristaha sawirka faraha, oo ka tagaya qaybta dambe ee isla nadiifta nidaamka kamaradda. Marka la eego, taleefanka casriga ahi wuxuu leeyahay Wi-Fi 5, NFC, oo loo yaqaan 'minijack' oo loogu talagalay dhagaha la geliyo iyo dareemayaal infrared ah oo lagu xakameeyo aaladaha dibadda.
Dhinaca kale, baytariga mobilkaan waxaa lagu hayaa awood 5.000 mAh wuxuuna la jaan qaadayaa taageerooyinka si dhakhso ah loogu soo oogayo 18 W. Tan waxaa lagu soo oogay dekedda USB-C.
XIOAMI REDMI XUSUUS 10T
MUUQAAL 6.5-inch IPS LCD leh FullHD + qaraarka oo ah 2.340 x 1.080 pixels / Corning Gorilla Glass 3
PRORESOR Mediatek Dimentisy 700 oo aan lahayn isku xirnaanta 5G
GOOBKA BADBAADADA GUDAHA 64/128 GB oo leh ballaarinta xasuusta iyadoo la adeegsanayo kaarka microSD
KAAMARKA DIBADDA 48 MP weyn oo leh f / 1.79 aperture + 2 MP Bokeh sensor oo leh f / 2.4 aperture + 2 MP lens lens oo leh f / 2.4 aperture
CAMERA HORE 8 xildhibaan leh fur f / 2.0
BATARY 5.000 mAh oo leh 30-watt Warp Charge lacag deg deg ah (5 volts / 6 amps)
NIDAAMKA HAWLGALKA Android 10 hoosta MIUI 12
Isku xirnaanta Wi-Fi 5 / Bluetooth 5.1 / NFC / GPS + GLONASS + Galileo / Taageero Dual-SIM / 4G LTE
MUUQAALO KALE Side Mount Fingerprint Reader / Aqoonsiga Wejiga / USB-C
Qiyaasaha iyo Miisaanka 161.81 x 75.34 x 8.92 mm iyo 190 g
Xiaomi Redmi Note 10T cusub ayaa durba qaab ahaan looga bilaabay Ruushka. Waqtigan xaadirka ah, mobilada waxaa laga heli karaa oo keliya halkaas, laakiin waxaa la filayaa inuu dhowaan gaari doono suuqa Yurub iyo, sidaas darteed, Isbaanish. Isla mar ahaantaana, waxay dhawaan u bilaabi doontaa adduunka oo dhan sidoo kale. Noocyadooda iyo qiimahooda ilaa hadda la shaaciyey waa kuwan soo socda:
Redmi Xusuusin 10T 4GB RAM oo leh 64GB ROM: weli lama shaacin.
Redmi Xusuusin 10T 4 RAM oo leh 128 GB ROM: 19.990 RUB (qiyaastii. 230 euro sarrifka).
Redmi Xusuusin 10T 6GB RAM oo leh 128GB ROM: weli lama shaacin.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Redmi Note 10T, moobayl sida Redmi Note 10 5G ah, laakiin leh 4G
Top 5 barnaamijyada wax soo saarka ee Android